Ekuphileni kwansuku zonke, indawo enkulu ugajwe zokuxhumana bukhoma ngisho exchange of ukwaziswa okukuyi-Internet, bese kukhona isidingo ukudlulisa, isibonelo, isiqeshana umdlalo, umbhalo, noma insalela yawo. Lokhu kungaba umfanekiso umsebenzisi ukufunda uhlelo olusha, noma olunye ulwazi elula ukuze uthumele isithombe esimile. Scrin noma skrini ngokuthi isifinyezo kuyi-computer. Empeleni, izindlela indlela yokwenza skrini, kukhona ezimbalwa. It kuyafaneleka ukucabangela ezinye zazo.
Izindlela ukudala-skrini ngosizo lwe-Windows
Njengoba ngendlela lelula ukuthi akudingi kwesofthiwe eyengeziwe, Paint ephelele - elula ukuhlela, oyingxenye ye-MS-Windows. Ukubamba umfanekiso ka wonke-computer, yanele ukuba usebenzise "Phrinta Screen" ukhiye esikrinini ikhibhodi, bese uya "Qala" imenyu bese ukhethe "Wonke Izinhlelo", bese uya "Izesekeli" futhi uqale Paint. In the hlelo udinga ukukhetha "Hlela" futhi "Namathisela". , Kufanele chofoza "Ifayela" futhi "Londoloza", futhi ungakhetha ejwayelekile isithombe ukugcina skrini zakho kusuka esikrinini. Ukugcina skrini kusuka ewindini olulodwa (ngokuvamile umsebenzi), ungasebenzisa izinkinobho «Alt Phrinta Screen».
Uhlelo lokudala-skrini prednaznchennye
Ukugcina izithombe kwi qapha, isibonelo, izithombe, izithombe kanye neminye imininingwane ukuthi ufuna ukwabelana nabangani bakho, ungasebenzisa uhlelo olukhethekile khulula, etholakala ukusatshalaliswa mahhala kuyi-Internet. Ngokwesibonelo, ungasebenzisa uhlelo Floomby. Kuyinto elula ukusebenzisa, it is efakwe kwi computer ngesiRashiya. iwebhusayithi wakhe inikeza amathiphu kanjani ukuthatha skrini ke isithombe kungenziwa asuswe kusayithi, noma uthumele isixhumanisi kulo abangane babo ngokwethukela. Uhlelo Floomby ikuvumela ukuthatha isithombe noma isikrini sonke noma ingxenye kuphela ke. Imodi Shooting kungenziwa kukhethwe ngokuchofoza isithonjana iwashi elivela uma ugijima Umbuso indawo.
Olunye uhlelo ewusizo ngokuthi Magic sesikrini. Akukhona sihluke kakhulu ngenhla, futhi kanjani ukuthatha skrini kuso, futhi. Ngaphambi kokwethulwa yayo, ungathola amathiphu ukusebenza efanele. Njengoba Floomby, ku Magic sesikrini Uhlelo iwebhusayithi eshicilelwe sikrini abasebenzisi, futhi uthole kukhulunywa isithombe wadala wabo. Sikrini unganikezwa incazelo futhi uzilungise usebenzisa "Ibhulashi" ithuluzi. In the izilungiselelo kuyinto umsebenzi kukhethwa format lapho isithombe sigcinwa, kungashiwo PNG bmp, i-jpeg.
Okuningi eziyinkimbinkimbi futhi ifakwe ongakhetha eziningi Jing wuhlelo Nokho, okuyinto, has eyodwa ethile: itholakala kuphela ngesiNgisi. Ukuze uthole ukwaziswa sendlela ukuthatha skrini, wathi ividiyo ethunyelwe kwi-website ye ohlelweni. Kungase kushiwo lula ngokuhlukana izithombe kusuka Jing izici eziqondile uzimele. Uhlelo ibona isithombe marquee unxande efakwe okukodwa. Kungaba ukulondoloza isithombe-hard disk yakho, ufake kusayithi lakho screencast.com noma ukubeka isithombe ebhodini lokunamathisela ukuze unamathisele umhleli ihluzo. Ukusebenzisa software, ungakha izithombe elula-skrini kuvidiyo format. Lokhu kuwusizo lapho udinga ukukhiqiza imiyalelo kubasebenzisi ukuthi bafunde computer. Ngenjongo efanayo (ukudala skrini isiqophi) is a khulula uhlelo SnapaShot.
Sikrini esikrinini eselula Android
Abanikazi Smartphones Android nethuba ukuthatha izithombe qapha ikhompyutha kumadivayisi eselula zabo. Ukuze wenze lokhu, kanyekanye cindezela izinkinobho ezimbili: amandla ukubuya, wehlise ivolumu bese uvula ifoni, noma cindezela isikhathi eside inkinobho "Izinhlelo kwakamuva". Ukuze uthole skrini Android isikrini, ungasebenzisa uhlelo ADB, okumele ifakiwe kukhompyutha yakho. Kufanele aqaphele Android ithebhulethi, bese kungenziwa asuswe screen.
Vikela Ukwaziswa: kanjani ukubeka iphasiwedi on a router
I elula kunazo ezinobungozi isofthiwe Ithuluzi
Ingane ihlanza. Yini okufanele ngiyenze? Sizokutshela!
GF-021 Primer: Ukucaciswa, ukubuyekezwa, ukusetshenziswa, ukusetshenziswa
The bulkhead injini. Amathiphu namacebo
Opel Astra sikazwelonke - izinga German e version Russian